RASMI: Ashley Cole oo ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta – Gool FM
RASMI: Ashley Cole oo ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta
(England) 18 Agoosto 2019. Daafacii hore garabka bidix ee xulka England Ashley Cole ayaa ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta, kaddib xirfad aad u qurux badan uu soo qaatay.
Ashley Cole ayaa si rasmi ah ugu shaaciyay go’aanka uu kaga fariistay kubadda cagta, xili uu ku sugnaa mid ka mid ah istuudiyaasha lagu falaqeenayo kulamada horyaalka Premier League ee shabakada “Sky Sport’ ee maanta oo Axad ah la ciyaarayo.
Cole ayaa wuxuu xirfadiisa ciyaareed kusoo bandhigay kubadda cagta ee aad wanaagsan, isaga oo matalay xulka qaranka ee England 107 kulan oo caalami ah, kahor inta uusan si rasmi ah uga fariisan ciyaaraha caalamiga ah sanadkii 2014-kii.
Ashley Cole ayaa 385 kulan oo horyaalka Premier League ah u ciyaaray kooxaha Arsenal, Crystal Palace iyo Chelsea ka hor inta uusan ka tagin Premier League isaga oo u dhaqaaqay naadiga Roma 2014-kii, kaddib wuxuu kaga sii dhaqaaqay Los Angeles Galaxy 2016-kii, kahor inta uusan xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta ku soo xirin xili ciyaareedkii hore kooxda Derby County.
Shaxda rasmiga ah kooxaha Chelsea Vs Leicester City ee kulanka xiisaha badan horyaalka Premier
Philippe Coutinho oo gaaray dalka Jarmalka ka hor inta uusan dhammaystirin ku biiristiisa kooxda Bayern Munich